जिब्रो हेरेरै थाहा पाउन सकिन्छ तपाई स्वस्थ्य कि अस्वस्थ्य ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»जिब्रो हेरेरै थाहा पाउन सकिन्छ तपाई स्वस्थ्य कि अस्वस्थ्य !
जिब्रो हेरेरै थाहा पाउन सकिन्छ तपाई स्वस्थ्य कि अस्वस्थ्य !
By रिता घिसिंग on १९ भाद्र २०७५, मंगलवार ०५:४६ स्वास्थ्य/जीवनशैली
एजेन्सी : जिब्रोको खास काम हो स्वाद लिने । हामीले खाने हरेक खानाको स्वाद थाहा पाउने माध्यम हो जिब्रो । हामी सबैको शरीरमा विभिन्न समस्याहरु हुन्छन । हो, ती समस्याहरु अब जिब्रो हेरेरै थाहा पाउन सकिन्छ । शरीरको समस्या पहिचान गर्न जिब्रो पनि एउटा माध्याम हुनसक्छ । जिब्रोको रंगले तपाईको रोगको पहिचान गर्छ ।
अध्ययनबाट के पनि थाहा लागेको छ भने जिब्रोको रंगले शरीरको रोग पनि पहिचान गर्न सकिन्छ । यो सरल विधी हो, आफ्नो स्वस्थ्यबारे थाहा पाउने । कस्तो रंगको जिब्रोले के जनाउछ त ?
१.गुलाबी र नरम
यदि तपाईको जिब्रोको रंग गुलाबी छ र सधै नरम हुन्छ भने स्वास्थ्यमा कुनै खराबी छैन । त्यसमा कुनै दाग, धब्बा देखिनु हुँदैन ।
जिब्रोको रंग पहेंलो छ र सुख्खा पनि छ भने तपाईमा थकान, कमजोरी, अनिन्द्राको संकेत गर्छ । त्यस्तै आन्द्रामा समस्या हुँदा पनि जिब्रोको रंग पहेंलो तथा सुख्खा हुनेगर्छ । जण्डिस भएको अवस्थामा समेत जिब्रोंको रंग पहेंलो हुन्छ ।
४. जिब्रोको दाँयाबाँया रातो
पेट तथा आन्द्राको समस्या छ भने त्यसको प्रभाव जिब्रोमा देखिन्छ । यदि तपाईको आन्द्रामा समस्या छ भने जिब्रोको दाँयाबाँया भाग रातो हुन्छ । जिब्रोको अगाडि वा टुप्पोको भागमा रातो छ भने रजोनीवृत्ति तथा मानसिक समस्याको कारण पनि हुनसक्छ ।
यदि तपाईको जिब्रोको छाला सेतो छ, सेतो वा पहेंलो काई लागेको छ भने थाहा पाउनुहोस् कि तपाईलाई चिसो, भाइरल संक्रमण हुनसक्छ ।
चुरोटको सेवन, औषधी, मुखको सफाई नहुनु जस्ता कारणले जिब्रो कालो हुन्छ । एन्टिबायोटिक लिएपछि ब्याक्टेरिया परिवर्तनले पनि जिब्रो कालो हुन्छ । जिब्रो सुन्निएको छ भने सर्तक हुनैपर्छ । यसले थाइराइड, ल्यूकेमिया, एनीमिया, क्यान्सर आदिको संकेत गर्छ ।